एमालेको कार्यदल स्तरमा १० बुँदे सहमति, होला त एकता ? « Nepal Tube Australia
गृहपृष्ठ » Breaking News » एमालेको कार्यदल स्तरमा १० बुँदे सहमति, होला त एकता ?
एमालेको कार्यदल स्तरमा १० बुँदे सहमति, होला त एकता ?
काठमाडौं । एमाले कार्यदल बैठकले पार्टीभित्रको अन्तरकलह हल गर्दै एकताबद्ध हुनेगरि १० बुँदे सहमति गरेको छ । तेह्र घन्टा लामो बैठकपछि सहमतिबारे जानकारी दिँदै नेता भीम रावलले एकताबद्ध हुनेगरि कार्यदलका सदस्यहरुबीच १० बुँदे सहमति भएको जानकारी दिनुभएको हो ।
कार्यदलका नेताहरुले यी सहमति नेताद्वय केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाललाई बुझाउने भएका छन्। एमालेका सचिव एवंम प्रधानमन्त्रीतर्फका कार्यदल सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले १० बुँदे प्रस्ताव जानकारी गराउँदै पछिल्लो गतिहिन परिस्थितिको अन्त्य गर्न एकताको रक्षा र विकास अपरिहार्य हुने बताउनुभयो ।
यस्तो छ, सहमतिको १० बुँदा :